Ulawulo loMgangatho weMveliso, Ukwamkelwa kokuThengwa kukaRhulumente -i-GIS
Jonga iinkcukacha →
Amathini, iimveliso ze-Aquatic, Flavorings kunye nezinye.
Imveliso yendlu kunye neMveliso ye-Elektroniki, iimveliso zeaudiyo kunye nevidiyo, isixhobo seKhompyuter, izibane kunye nezibane, iiComputer, iTelefoni.
Izinto eziyimichiza eziyimichiza kunye neemveliso zeekhemikhali, Iichemicals kunye nezongezelelo, isichumisi kunye nesichumisi esenziwe ngemveliso, Imveliso yeekhemikhali yaseKhaya.
Isinxibo, izihlangu, ilaphu lasekhaya, Ilaphu, ibhegi kunye nesutikheyisi, Ezinye iimpahla ezithambileyo.
Isixhobo sombane, Iinxalenye zoomatshini, Iinxalenye ezizenzekelayo, Impompo, iMore, Icandelo lamachiza, Ukufa okuphosa, iinxalenye zokugcina.
Umsebenzi wezandla, imveliso yendlu, ifenitshala, eyokwakha kunye nemveliso yokubonelelwa kwendlu, iithoyi, ezemidlalo, iimveliso zeCeramic, iimveliso zamatye.
Inkonzo eziNgcono zaKho
I-GIS (Iinkonzo zokuHlola ngokuBanzi Co, Ltd.) yinkampani esemgangathweni yobunjineli kunye nolawulo lwenkonzo yokubonisana. Izibophelele ekuncedeni abathengi ukuba baseke kwaye baphucule ukuqinisekiswa komgangatho kunye nokulawulwa komgangatho, kunye nokunceda abathengi baphuhlise kwaye babeke iliso kubaxhasi babo. Ukusukela ngo-2005, i-GIS ifumene ulawulo oluphezulu loLawulo Jikelele lokuLawulwa kweMigangatho ...
Isaziso malunga nokukhuthaza inkonzo esemgangathweni
Ukuhlangula iikati ezilahlekileyo-Iinkonzo zoVavanyo Jikelele, Co
Ngomvulo-24 ukuya ku-243
Intombazana yase-GIS yafumana ikati elahlekileyo, yancedisa ukuya kuhlamba, emva koko yayithumela kwisibhedlele sezilwanyana ukuze ihlolwe ngobuchule kwaye inyange. Kwaye ekugqibeleni, wanceda ukufumana umntwana ongamzondeliyo ikati ihlwempuzekileyo. Thatmeans, ikati yafumana usapho olushushu. Ms.Titania, sibabulela kakhulu ngenceba yakho.
Factory Assessment , Third Party Inspection , Full Online Inspection , zokuqala Ukuveliswa Khangela , Xa Ukuhlolwa , Isikhongozelo Ukuphepha Supervision ,